युगसम्बाद साप्ताहिक - संघर्ष अखण्डता र विखडनका बीच
Monday, 01.27.2020, 07:20pm (GMT+5.5) Home Contact
Wednesday, 12.07.2016, 02:36pm (GMT+5.5)
अहिले मुलुकको एक भाग आन्दोलित छ । यो आन्दोलन तराई–पहाडको सम्बन्ध टुटाउन खोजेको बिरुद्धमा छ । प्रदेश नं. ५ का पहाडी जिल्लालाई तराईबाट अलग गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि पश्चिम नेपालको केन्द्र बुटवलमा यसको विपक्षमा मानव सागर उर्लिएको छ । पहाडी जिल्लाहरुमा अलगअलग आन्दोलन चलिरहेको छ । सरकार पक्षका सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा नेताहरु यसको बिरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको साथ दिइरहेका छन ।
शुक्रबार बुटवलमा मानवसागर उर्लियो । सरकारलाई यसले ठूलो झड्का दिएको छ । आम जनताको सहमतिबिना सिंहदरबारमा बसेर विदेशीको इशारामा मुलुक विभाजनको निर्णय गर्दा जनता सडकमा उत्रनु स्वाभाविक हो । अर्कोतिर यो प्रस्ताव जसका लागि ल्याइयो उनीहरुले नै सहमति जनाएका छैनन् । जसका लागि ल्याइएको हो उनीहरु नै असहमत हुने प्रस्ताव कसका लागि कहाँबाट आयो ? यो विषयमा सबै जानकार छन् । अहिलेको अवस्थाले मुलुकको अखण्डता र विखण्डनको कित्ताकाट भएको छ ।
बिरोधको स्वर बढ्न थालेपछि सरकार संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने दोधारमा छ । संसदमा छलफलका लागि ल्याइए यो प्रस्ताव स्वतः असफल हुने निश्चित छ । भारतलाई रिझाउकै लागि मात्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर नौ महिने तम्सुक गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पाँच महिनामै बिदा हुनुपर्ने अवस्था सिर्जित छ । सरकारले पेश गरेको विधेयक असफल भए नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । तर भित्रभित्रै अनेक खेल चलिरहेका छन् । मतदानका दिनसम्म के हुन्छ भन्न सकिन्न ।
संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मधेशवादी दल नै पूर्णरुपमा नउभिएका बेला सरकारले किन वितण्डा मच्चाउने शैलीमा संशोधन दर्ता ग¥यो भन्ने सवालको चित्तबुझ्दो उत्तर छैन । संशोधन प्रस्ताव बाहिरिएलगत्तै सुरु भएको आन्दोलनले मुलुकमा अर्को एउटा वितण्डा मच्चाउने संकेत गरिसकेको छ । जनतालाई विभाजनको रेखा कोर्नुको उद्देश्य के हो ? प्रदेश नं. ५ का पहाडी जिल्ला अलग गरेर सरकारले कसलाई खुसी पार्न चाहेको हो ? स्वयं मधेशवादी कतिपय नेताहरु नै आफूहरुको त्यस्तो माग नभएको बताइरहेका छन् । तर भित्री कुरा अर्कै छ । त्यस्तै नागरिकताका विषयमा पनि सरकारले मधेशवादीको मागभन्दा माथि उठेर अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार हुने प्रावधान राखेर अंगीकृतलाई राष्ट्रको उच्च पदमा पुग्ने ढोका खोलिदिएको छ ।
संविधान संशोधनका यी सवै विषयमा दिल्लीको विशेष रुची रहेको जगजाहेर नै छ । भारतीय राजदूत रंजीत रे र रअका प्रमुखको सक्रियता यतिबेला खुल्ला चर्चाको विषय छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण र भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका बेलामा समेत प्रमुख मुद्दा बनाइएको संविधान संशोधनका लागि सरकारले प्रमुख विपक्षीको हात लिनुपर्ने आवश्यकता नै देखेन । भारतीय दूताबासको आड भरोसामा संविधान संशोधन प्रस्ताव मध्यरातमा दर्ता गराउने वर्तमान सरकार कुन पृष्ठभूमिमा कसरी बनेको थियो र यसको तोकिएको मुख्य काम के हो भन्ने कुराबारे कुनै पनि नेपाली अनभिज्ञ छैनन् ।
संविधान संशोधन जुन पृष्ठभूमि र सन्दर्भमा गर्ने तयारी भैरहेको छ यसले अहिले रहेका असन्तुष्ट पक्ष नै सन्तुष्ट नहुने मात्र हैन असन्तुष्टको जमात अरु बढाउने निश्चित छ । प्रस्ताव सार्वजनिक भएदेखि नै आन्दोलन चर्किरहेको र सत्तारुढ दलका सांसदहरु नै यसको विपक्षमा जाने घोषणा गरिरहेका बेला सरकारले किन राजनीतिक सहमतिबिना नै संशोधन दर्ता ग¥यो भन्ने जिज्ञासाको उत्तर उनीहरुसंग छैन । यो प्रस्तावले संविधान कार्यान्वयको बाटो खोल्ने हैन कि वितण्डाको घ्याम्पो फुटाउँदै असन्तुष्टिहरु अरु छिरल्ने छ ।
मधेशवादी असन्तुष्ट भए पनि वा अरु जुनसुकै पक्ष आक्रोशित भए पनि भारत खुसी भए सबै कुरा पूरा हुने र भारत दाहिना भए सत्ता सुखभोग लामो समयसम्म गरिरहन पाइने गलत मान्यताकै बीचमा संशोधन प्रस्ताव आएको हो । किनभने भारतले १४ महिना अघि सार्वजनिक गरेको ७ बुँदे प्रस्ताव नै अहिलेको संशोधनमा परेको छ । भारतलाई खुसी पार्ने गरी गर्न खोजिएको संविधान संशोधनको तयारीले नेपालको आन्तरिक राजनीति भाँडिएर द्वन्द्वमा परिणत हुने खतरा बढिरहेको छ । यथास्थितिमा संविधान संशोधन प्रस्तावलाई रोकेर गहन राजनीतिक छलफलपछि चलाउने र त्यसअघि स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारी गर्ने हो भने अहिलेका धेरै समस्या समाधान हुनेछन् । नत्र भने भारतलाई खुशी गराउन सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावले यो मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक सद्भावमाथि धावा बोलिसकेको छ । यो कदमले नेपालभित्र आन्तरिक कलह बढाउने र द्वन्द्व चर्काउने निश्चित नै देखिएको छ ।